Caliber 4.0 inosvika iine nyowani ebook muoni uye nedzimwe nhau | Linux Vakapindwa muropa
Caliber 4.0 inosvika iine nyowani ebook muoni uye nedzimwe nhau dzakakosha
pablinux | | Updated on 07/10/2019 16:04 | Noticias, Zvirongwa
Kana iwe uri wekumanikidza kuverenga muverengi, nhau idzi dzinokufarira. Kunyangwe, kune rimwe divi, zvinogona zvakare kuti iwe unotozviziva, nekuti Kavid Goyal akazivisa neChishanu kuvhurwa uye kuwanikwa kwe Caliber 4.0, yekutanga yekuvandudza huru mumakore maviri yeiyi e-bhuku manejimendi software. Sekusunungurwa kukuru, iyo nyowani vhezheni yeCaliber inosanganisira nhau dzinonakidza, mamwe acho ane chekuita nezvatinoona nekuda kwekunyorazve.
Izvo zvakanyorwazve zvakakwana muCaliber 4.0 ndezvayo ebook muoni. Iyo vhezheni nyowani inotarisa pakuratidza zvinyorwa zvebhuku kudzivisa zvinokanganisa. Kune rimwe divi, ivo zvakare vakasanganisira maficha manyowani mune zvemukati metadata mupepeti, nekuti chero munhu anofarira kuchengeta mabhuku, sesu vedu vanofarira mimhanzi, senge metadata yavo kuti vape ruzivo nenzira kwayo.
Zvimwe zvinhu zvitsva zvinowanikwa muCaliber 4.0
Kugona kuwedzera kana kubvisa mabhuku kubva pane zvemukati server.
Kubvira kwekushandura mabhuku kubva / kune mafomati anotsigirwa neCaliber.
Izvo zvemukati server ikozvino yakazara interface kune edu maraibhurari.
Iyo nyowani eBook muoni inogovera codebase pamwe neyebrowser muoni, ichibvumira mugadziri wayo kuwedzera rutsigiro rwezvinhu zvitsva senge zvirevo.
Ikozvino inoshandisa iyo Qt WebEngine webhu zvemukati inopa injini, iyo inowedzera Chromium kugona.
Tsigiro yeHTML neCSS yakadzikiswa.
Caliber 4.0 yave kuwanikwa kurodha pasi kubva kune yayo yepamutemo peji reWindows uye macOS. Semazuva ese, vashandisi veLinux vane nzira dzakasiyana dzekuisa iyo, pakati payo isu tine iyo Flatpak vhezheni kana zvinyorwa zvepamutemo zvekuparadzirwa kwedu kweLinux. Kana isu tichida kushandisa yazvino vhezheni, izvozvi isu tinogona chete kushandisa iyo Flatpak vhezheni kana kurodha mabhinari sekutsanangurwa kwayakaitwa Iyi link.
Kana iwe ukaedza Caliber 4.0, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa.
Chengetedza chikumbiro kuronga uye kuverenga e-mabhuku ako paLinux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Caliber 4.0 inosvika iine nyowani ebook muoni uye nedzimwe nhau dzakakosha
Muverengi mutsva weCaliber ari kundipa mamwe matambudziko nePub. Hazvina kudaro nemobi ini azw3
Sarudzo dzezvikwata zvakasarudzika dziri kutsakatika: Fedora inosiyawo makumi matatu nematatu